चिनी लत अन्त्य गर्न सल्लाहहरू | बेजिया
टोय टोरेस | | स्वास्थ्य सल्लाहहरू
चिनी नशा एक वयस्क र बच्चाहरू दुबै व्यक्तिले भोग्ने वास्तविक समस्या हो। तपाईले कल्पना गर्न भन्दा बढी र त्यसले गम्भीर स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याउँछ। चिनी अत्यधिक सेवन गर्नुहोस् यो मोटाई को एक मुख्य कारण हो। तर यो गम्भीर रोगहरू जस्तै क्यान्सर, मधुमेह र मुटु सम्बन्धी समस्याहरूसँग पनि सम्बन्धित छ।
आहारबाट चिनीलाई पूर्ण रूपमा हटाउनु व्यावहारिक रूपमा असम्भव छ, किनभने यो एक पदार्थ हो जुन स्वाभाविक रूपमा धेरै खाद्य पदार्थहरूमा उपस्थित हुन्छ। यद्यपि फल चिनीसँग गर्न को लागी केहि हुँदैन, उदाहरणका लागि परिष्कृत चिनीको साथ तिनीहरूमा प्रशोधित उत्पादहरू समावेश छन् जुन निर्माण गरिएको छ। पछिल्लो केसमा, त्यस्तो पदार्थ जुनसँग कुनै पौष्टिक मूल्य हुँदैन र त्यसैले हाम्रो शरीरको लागि आवश्यक छैन।
1 चिनी लत अन्त्य गर्न स्वस्थ बानीहरू
1.1 स्वस्थ चिनी विकल्पहरू
1.2 प्राकृतिक खाद्य पदार्थ छान्नुहोस्
1.3 मिठो पेय पदार्थहरू हटाउनुहोस्
1.4 तनाव प्रबन्ध गर्नुहोस्
2 तपाइँको समस्या बारे सचेत हुनुहोस् ताकि तपाइँ यससँग लड्न सक्नुहुन्छ
चिनी लत अन्त्य गर्न स्वस्थ बानीहरू
चिनीको लत अन्त्य गर्न सजिलो छैन, तर थोरै इच्छाशक्ति द्वारा र केही आहार परिवर्तनहरूलाई समाहित गर्दा, यो सम्भव छ। स्वस्थ खाना बानीले तपाईंलाई राम्रो स्वास्थ्यमा मद्दत गर्दछ किनभने तपाईं रोगहरू प्रति अधिक प्रतिरोधी हुनुहुनेछ। त्यसोभए, नछुटाउनुहोस् निम्नलिखित सुझावहरू तपाईंको चिनी सेवन उल्लेखनीय रूपमा कम गर्न.
स्वस्थ चिनी विकल्पहरू
चिनीयुक्त कफीबाट प्राकृतिक कुरोमा जान सजिलो हुँदै गइरहेको छैन र यदि तपाईंले प्रयास गर्नुभयो भने तपाईंले चाँडै छोड्नुहुनेछ। सामान्य रूपमा चिनीको साथ लिने अन्य उत्पादनहरूमा पनि त्यस्तै हुन्छ, जस्तै घरेलु केक, दही वा इन्फ्युजन, अन्यहरू। फाइदा यो हो कि त्यहाँ फरक छन् मिठाई विकल्पहरू जुन तपाईं एक स्वस्थ तरिका मा मिठो गर्न सक्नुहुन्छ.
एरिथ्रिटोल: यो बिभिन्न खानाहरूबाट निकालिन्छ जस्तै मक वा मशरूम, मुश्किलसँगै क्यालोरी हुन्छ र यो दाँतहरूको लागि खतरनाक छैन।
मिति: यदि तपाईं घरेलु मिठाईहरू तयार गर्न चाहनुहुन्छ भने मिति पेस्ट उत्तम विकल्प हो किनभने धेरै थोरै मात्राको साथ तपाईंले धेरै मिठोपन पाउनुहुन्छ। तर, मितिहरू छन् चिनी को एक धेरै र क्यालोरी को एक धेरै, ताकि तपाईं तिनीहरूलाई संयम मा उपभोग गर्नुपर्छ।
स्टेभिया: यो चिनी विकल्प क्यालोरी-मुक्त छ, दाँतलाई हानी गर्दैन र ग्लुकोजको स्तरमा परिवर्तन गर्दैन रगतमा। त्यसैले मधुमेह जस्ता रोगबाट पीडित व्यक्तिहरूको लागि पनि यो उत्तम विकल्प हो।
प्राकृतिक खाद्य पदार्थ छान्नुहोस्
क्यान्ड र प्रशोधन गरिएका उत्पादहरूको विशाल बहुमतले तिनीहरूका घटकहरू बीच चिनीको ठूलो मात्रा हुन्छ। तसर्थ, सबै केसहरूमा सबै भन्दा राम्रो विकल्प सधैं यसको सबैभन्दा प्राकृतिक ढाँचामा खाना छनौट गर्नु हो। प्रिकुक्ड खाना, फ्रिज गरिएको खाना, क्यान्डका सामानहरू वेवास्ता गर्नुहोस् र खाना लिनुहोस्। घरमा खाना तयार गर्नाले तपाईले खान्नुहुने सामग्री नियन्त्रण गर्न अनुमति दिनेछ, चिनीजस्ता खतरनाक पदार्थहरू लिन को आवश्यकता बिना।
मिठो पेय पदार्थहरू हटाउनुहोस्
सुगन्धित पेयहरू, जस्तै सफ्ट ड्रिंक, प्याक गरिएको जुस, वा मीठो कफी, चिनीको लत भएका व्यक्तिहरूमा परिष्कृत चिनीको मुख्य स्रोत हुन्। कुनै पनि केसमा उत्तम विकल्प भनेको पानी हो, जुन तपाईंले चिनीको अभावको बारेमा चिन्ता हटाउन मद्दत गर्दछ भने तपाईं स्वादको उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रिज गरिएको फल वा थोरै मिठाई जोड्नुहोस्, त्यसैले परिवर्तन यति अचानक हुने छैन।
तनाव प्रबन्ध गर्नुहोस्
कहिलेकाँही शरीर आफैंको प्रमुख शत्रु हुन्छ, यस अवस्थामा। कोर्टिसोल, के हो तनाव हार्मोन, भोक को कारण र फ्याट को भण्डारण गर्न योगदान गर्दछ। जब तपाईलाई तनाव महसुस हुन्छ, तपाईले विकल्पहरू खोज्नु पर्छ जस्तै सास फेर्न, स्तरहरू कम गर्न र कोर्टिसोलको उत्पादनबाट बच्न।
तपाइँको समस्या बारे सचेत हुनुहोस् ताकि तपाइँ यससँग लड्न सक्नुहुन्छ
एक लत चिन्न सजिलो छैन, पदार्थ को प्रकार को परवाह नगरी कि लत उत्पादन गर्दछ। तर योसँग लड्ने कुनै उपाय छैन, यदि यो छैन भने मान्नु एक वास्तविक समस्या छ। यदि चिनी रोक्नको सोचाईले तपाईंलाई चिन्तित बनाउँछ भने, तपाईं सम्भवत अम्मली हुनुहुन्छ, जस्तो कि धेरै व्यक्तिहरू जसलाई यो समस्या थाहा छैन।
चिनी छोड्नु, वा यसको खपत कम गर्नु, छोटो र दीर्घकालीन स्वास्थ्यको कुरा हो। यी संग साना परिवर्तनहरू र तपाईंको सबै इच्छाशक्ति, तपाईं यो निर्भरताबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » स्वास्थ्य » स्वास्थ्य सल्लाहहरू » चिनी लत अन्त्य गर्न सल्लाहहरू